IMeya isolwa ngokubhubhudla imali yabakhokhi bentela idla izibiliboco | News24
IMeya isolwa ngokubhubhudla imali yabakhokhi bentela idla izibiliboco
Johannesburg - IMeya kaMasipala wendawo yaseMfuleni, uSimon Mofokeng, isichithe imali engu-R1 772 549.28, idla ukudla kwasezitolo okubalwa kukho i-KFC, neNandos enye imali iyichitha nasemahhotela.
Lokhu kudalulwe nguNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu nokuHlaliswa kwaBantu eGauteng, uPaul Mashatile, ngesikhathi kuphendulwa umbuzo weDemocratic Alliance esiShayamthetho, lokhu kungokusho kwesitatimende selungu lesiShayamthethio, uKingsol Chabalala.
OLUNYE UDABA:Ihlafuna ijeqeza iMeya yakwaMhlabuyalingana esongelwa abasebenzi
"IMeya uMofokeng isebenzise isamba semali esishaqisayo esingu-R1.1 million phakathi konyaka wango-2011 no-2015 esayiMeya kaMasipala waseSedibeng ngaphambi kokuba abe yiMeya yaseMfuleni lapho esebhubhudle khona enye imali engu-R629 000 phakathi kukaNovembva 2015 no-Ephreli 2017."
Uphinde wabuza nangemali esetshenziswa ukuthelela uphethiloli nokuqasha izimoto.
I-DA icele ihhovisi likaMashatile ukuba likhiphe eminye imininingwane okubalwa kuyo imali esetshenzisiwe neziliphu zemali eyasetshenziswa yimeya ekhadini likahulumeni.